ကေအိုင်အို ထုတ်ပြန်ချက် အနက် – Federal Journal
ကေအိုင်အို ထုတ်ပြန်ချက် အနက်
▄ ကေအိုင်အို ထုတ်ပြန်ချက် အနက်
ကေအိုင်အိုရဲ့ “ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်” ကိုကြည့်။ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့၊ ပါးနပ်တဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖြစ် ကြောင်း အထင်အရှားတွေ့ရတယ်။ တိုတိုတောင်းတောင်းနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ။ ဒါကို သရုပ်ခွဲ ကြည့်ရင် အခုလို တွေ့ရတယ်။
(၁) နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ အဖြေရှာတာကို လိုလားလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လက်နက် ကိုင်လမ်းစဉ် မလို။ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သာ ဖြေရှင်းလိုကြောင်း ထင်ရှားစွာပြတယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူလည်း အထိမနာ၊ နှစ်ဖက်စလုံးလည်း အဆုံးအရှုံးမကြီးတဲ့ သောက်ဆေးလိမ်းဆေးလောက်နဲ့ ပျောက်နိုင်တဲ့ ကုထုံးမို့ ဒါနဲ့ပဲ ကုတာ ကောင်းတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လူနာကို ခွဲတာ စိပ်တာ ဖြတ်တာ တောက်တာဟာ အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ တွေးဆ ချက်ကို နောက်ခံမှာ တွေ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) “ပါဝင်သင့်သူအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမရှိ” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ကို တွေ့ရတယ်။ ဒီစကားလုံးထဲမှာ NUG ဆိုတာလည်း ထည့်မထားဘူး၊ PDF ဆိုတာလည်း ထည့်မထားဘူး။ ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို ဖတ်တဲ့သူတိုင်း သိနားလည်ပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာာ တခြမ်းပဲ့ကြီး မဖြစ်ဖို့၊ တခြမ်းစောင်းကြီး မဖြစ်ဖို့။ ထို့နောက် စစ်ရေးမဟာဗျူဟာထဲက နည်းဗျူဟာတစ်ခု မဖြစ်ဖို့ မြန်မာစစ်တပ်ကို သဘောထားမှတ်ချက်လို့ နားလည်ရတယ်။ ဒီတော့ ဆိတ်ခေါင်းချိတ်ပြီး ခွေးသားမရောင်းပါနဲ့။ စစ်စစ်မှန်မှန်လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းတဲ့သဘော။
(၃) နောက်တစ်ချက်က “ဆွေးနွေးမယ့် အာဂျင်ဒါ” နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောတာလို့ နားလည်တယ်။ ကိုယ့်ဖဲကို ချိုး၊ ကိုယ့်လူကို ကိုယ်ဝေဖို့ လုပ်တတ်တဲ့ မြန်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အကျင့်ကို သိနေတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အိမ်ဖြည့် သဘောမျိုးနဲ့ ပါဝင်ခိုင်းတာမျိုး မြန်မာစစ်တပ်က လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိတယ်။ ဒါကို အရင်ကလည်း ကြုံခဲ့တယ်။ အခုလည်း ကြုံနေမှာ မလိုချင်တဲ့သဘော။ တစ်ဖက်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအာဂျင်ဒါ သတ်သတ်မှတ်မှတ် သီးသီးသန့် သန့် ပြမထားတဲ့အခါ၊ ဝှက်ဖဲတွေ အများကြီး ထုတ်ပြပြီး အဖြေမထွက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အီလည်လိုက်ခိုင်း၊ မျောခိုင်းပြီးတော့ အချိန်ဆွဲမှာ။ စစ်တိုက်ဖို့အတွက် သူ့အင်အားကို ဖြည့်ချိန် ပြင်နေမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒီတော့ မျှမျှတတ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ကြဖို့၊ ကွေ့သော ကောက်သော၊ ဝေ့သော ဝိုက်သော သဘောမလုပ်ပါနဲ့လို့ ဆိုလို ခြင်းဖြစ်တယ်။
(၄) နောက်ဆုံးတစ်ချက်က တန်းတူညီမျှမှုကို အထူးလိုလားကြောင်းပြတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ level of playing filed သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ပြင်ညီကွင်း ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ အသာစီးယူပြီး အထက်စီးက ညှိတာ၊ နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်တာ မျိုး မလိုလားဘူး။ ဒီတော့ တန်းတူအသိအမှတ်ပြု အထူးလိုတယ်။ အားလုံးခေါ်ပြီး နားချတာမျိုး၊ နှစ်သိမ့်တာမျိုး၊ ဝေစုနည်းနည်း ခွဲပေးပြီး မင်းလည်း ငြိမ် ၊ သူလည်း ငြိမ် ။ မင်းတို့ ခဏ ငြိမ်ပေးပါ၊ ငါ့ရဲ့ ရန်သူကို ဖိတိုက်မယ်။ ဒီတော့ ပေးစာကမ်းစာလေး ယူပြီး ပြန်ပါတော့ကွာ…. ဆိုတာမျိုး လုပ်လို့ မရ။
တကယ်တော့ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေဟာ နှစ်ကာလပေါင်းများစွာ မြန်မာစစ်တပ်ကို တစိုက်မတ်မတ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ခုခံတိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတာပါ။ လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလည်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပြီ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာလည်း ကြုံဖူးပြီးပြီ။ ၂၁ ရာစုပင်လုံလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကိုလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပြီ။ စစ်ပွဲပေါင်းများစွာလည်း ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုက်ခဲ့ပြီးပြီ။ အခုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖိတ်ခေါ်တာကို ထပ်ကြုံရတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အကျင့်ကို “အူမချေးခါး” ပါ မကျန် သိနေတဲ့ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ၊ ဒီတစ်ခါတော့ ဒီအဆင့်လောက်နဲ့တက်မလာတော့နဲ့…. လို့ ပြန်ပြောလိုက် သလိုဖြစ်ပါတယ်။